Miseho any Mexico ny sary sokitra taolana goavambe Famoronana an-tserasera
Indraindray dia mifantoka amin'ny sary sokitra misongadina samirery isika. Amin'ity indray mitoraka ity dia izy ireo ireo sary vongana goavambe natsangana tany Mexico noho ny sary famantarana azy ary andro malaza an'ny maty; Raha te hahalala misimisy kokoa momba an'ity andro ity ianao dia manoro hevitra anao izahay hahita an'i Cocó avy amin'i Pixar.
Mpanakanto teo an-toerana tany Mexico City izay hgaga namana sy olon-tsy fantatra miaraka amina sary sokitra taolana goavambe izay niseho manodidina ny tanàna. Fomba tsara indrindra hankalazana ny Andron'ny Maty ao amin'ny firenena rahavavintsika.
Tany Tláhuac no nisehoan'ireo sary sokitra ireo sy izany lasa viriosy amin'ny media sosialy. Ary io dia noho ireo sombin-kazo asfalta nanodidina azy, toa ny namela ny tany iray ho gaga ny mpandalo izy ireo.
Tsy sary sokitra izy ireo noho ny fahazotoany mety hitovy amin'ny an'ny hafa, fa io hevitra io ihany hametraka azy ireo ao amin'io tanàna io ihany mba hankafizan'ny karazana olom-pirenena rehetra, izay misarika ny sain'ity filokana artista ity ho an'ny andro manokana ho an'ny Meksikana.
Ity Andron'ny Maty ity dia manomboka amin'ny 31 Oktobra ary mifarana amin'ny 2 Novambra. Dia a andro manokana hankalazana ny fiainana an'ireo nandao azy. Andro iray izay iorenan'ny iray amin'ireo sarimihetsika Pixar farany antsoina hoe Coco ary misy ny sary mihetsika tonga lafatra. Sarimihetsika hijerena sy hankafizinay miaraka amin'ny fianakaviana ary mampiseho indray ny asa lehibe an'ity studio sary mihetsika ity.
Raha na inona na inona antony nahatongavanao tao amin'io tanàna io dia aza adino ny fanendrena anao maka selfie na maka sary koa hizara izany amin'ny namana sy fianakaviana. Andro tokana sy tena manandanja ho an'i Mexico.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ireo sary vongana taolana goavambe ireo dia natsangana tamin'ny Andron'ny Maty tany Mexico